Monday January 07, 2019 - 10:50:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Saaka aroortii hore ciidamada melleteriga wadanka Gaaboon ayaa inqilaab melleteri talada kula wareegay kadib markii ay qabsadeen magaalooyinka wadanka ugu waaweyn.
Wararka ka imaanaya wadanka Gaaboon ee dhaca galbeedka iyo bartamaha qaaradda Afrika ayaa sheegaya in ciidamada qalabka sida ay iclaamiyeen in ay tala wadanka lawareegeen ayna rideen Cali Boongo oo ahaa madaxweynaha wadanka.
Goob joogayaal ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in ay waddooyinka magaalada caasimadd ah ee Libreville ku arkayaan ciidamo wata gaadiid gaashaaman kuwaas oo la wareegaya xarumaha dowladda.
Saraakiisha ciidamada Melleteriga Gaaboon ayaa khudbad ka jeediyay Raadiyaha Afka dowladda ku hadla waxayna ku dhawaaqeen in iyagu ay talada wadanka lawareegeen ayna shaqada ka joojiyeen Madaxweynihii wadanka Cali Boogno oo talada qabtay sanaddii 2009.
Jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan ayaa laga maqlayaa magaalada Libreville sida dad goob joogayaal ah u sheegeen wakaaladda wararka Faransiiska, madaxweynaha la afgambiyay ayaa xaalad caafimaad ugu maqan wadanka Marocco halkaas oo lagu daweynayo kadib markii xanuun ugasoo booday dhanka maskaxda.
Xilligii inqilaabka melleteri dhacayay idaacadda dowladda waxaa ka baxaysay Khudbad duuban oo uu Cali Boongo ugu talagalay maalinta Xuriyadda Gaaboon balse ciidamada melleteriga ayaa khudbadda joojiyay inqilaab melleetri ayayna ku dhawaaqeen.
Qoyska Cali Boongo ayaa wadanka Maamulayay muddo 50 sanadood xiriir ah waxayna gacanta ku hayeen shidaalka uu hodonka ku yahay wadankaas iyo dhaqaalaha kasoo xaroodo dalxiiska.
Madaxweynaha maanta talada laga tuuray ayaa talada Gaaboon qabtay sanaddii 2009 xilligaas oo uu ka dhaxlay aabihii Cumar Boongo oo dhintay balse, qoyska Boongo wadanka iyaga ayaa maamulayay muddo nus qarni ah.
Inqilaabkan melleteri wuxuu imaanayaa xilli Arbacadii lasoo dhaafay ay wadanka Gaaboon gaareen 80 askari American ah oo Donald Trump udiray balse lama oga in ay ku lug leeyihiin wixii maanta dhacay.